Chipolo One Spot, yakasarudzika nzira kune AirTags | IPhone nhau
Luis Padilla | 10/06/2021 19:20 | IPhone zvishongedzo, dzakawanda
Chipolo inotipa yekutanga yeApple AirTags ine chigadzirwa icho, nemutengo wakaderera, inotipa zvese zvakanaka zveNetwork Kutsvaga uye inowedzera mamwe mapoinzi mukutsigira kwayo inoita kuti ive yekutenga kwakanaka.
Apple payakazivisa nhau dzenetiweki yeBusca, Chipolo yaive imwe yemhando dzakatanga kujoina. Zvichida hazvinyatso kuzivikanwa, asi uyu mugadziri anga ari munyika yemalebhuru enzvimbo kwemakore, uye iwo makore eruzivo pasina mubvunzo akabatsira kutanga chigadzirwa chakatenderera nemutengo wakanakisa: Chipolo One Spot. Mugari wenhaka weChipolo One, iyi nyowani nyowani inotora mukana weApple's Kutsvaga network, uye nekudaro ine zvese zvayakanakira: haidi yechitatu-bato kunyorera; kukurumidza uye nyore kurongedza pasina kunyoresa; shandisa mamirioni eApple zvishandiso kutumira nzvimbo yako.
1 Magadzirirwo uye kumisikidzwa
2 Apple's Tsvaga network pane yako sevhisi
3 Dzimwe nzira dzekuiwana
Magadzirirwo uye kumisikidzwa
Zvishoma kudiki pane Apple AirTags, diki repurasitiki disc iri rine bhatiri rinotsiviwa iro mugadziri anoti rinofanirwa kusvika pagore nekushandisa kwese. Kuti uchinje, iwe unofanirwa kuvhura iyo disc, hapana yakaomeswa yekuvhara system, ndosaka iri IPX5 yakasimbiswa (inoshora mvura isina matambudziko asi haigone kunyudzwa). Mukati mune diki mutauri unoibvumira kuburitsa ruzha rweanosvika 120dB, zvinonzwika kupfuura iyo AirTag, chimwe chinhu chakakosha kuti uzviwane kubva pasi pasofa. Uye chidiki diki, icho chinoita senge chisina musoro, asi icho chakakosha kwazvo: ine gomba rekuisungirira kumhete yakakosha, mhete pabhegi rako kana bhegi ... Zvinoreva kuti kunyangwe uine mutengo wakafanana neAirTag ( 30 € vs. € 35 yeApple chigadzirwa) hauchazodi zvimwe zvekushandisa kuti uishandise, saka mutengo wekupedzisira wakachipa kwazvo mune Chipolo.
Maitiro ayo ekugadzirisa anotanga kubva patinodzvanya Chipolo, izvo zvinoita kuti ibudise karuzha kanoratidza kuti kakatoitwa kare. Tinofanira kuvhura yedu Yekutsvaga app pane iyo iPhone kana iPad, uye tinya pazvinhu, isu tinowedzera chinhu chitsva uye tinomirira kuti mudziyo wedu uzviwane. Iye zvino iwe unongofanirwa kutevedzera nhanho dzinoratidzwa uye idzo dziri nyore sekuwedzera zita uye icon kuti ikurumidze kuiziva pamepu. Chinyorwa chichava kubva panguva ino chakabatana neICloud account yako uye chakagadzirira kushandiswa pazvinenge zvichidikanwa.
Kubatana kwaunoshandisa iBluetooth. Isu hatina U1 chip, iyo isingatenderi chaiyo yekutsvaga kweAirTags, chimwe chinhu icho pachangu chisinganditendise nekuti mashandiro acho anokanganisika. Izvo zvakare haina NFC, uye izvi zvinoreva kuti kana mumwe munhu akaiwana, hazvizokwana kuunza yavo iPhone kubhibolo, asi ivo vanofanirwa kuvhura iyo Tsvaga application uye voiongorora. Pane zvikamu zviviri zvidiki zvisina kunaka, imwe yacho inokwanisa kugoverwa (chaiyo yekutsvaga) uye imwe yacho inogadziriswa (iyo App yekutsvaga inoshandiswa uye ndizvozvo).
Apple's Tsvaga network pane yako sevhisi
Ngatiendei kuchinhu chakakosha, chii chaizvo chiri kuzokubatsira iwe kuti uwane chinhu chako chakarasika nekuda kweChipolo One Spot: ese iPhone, iPad neMac kutenderera pasirese zvichave antenna izvo zvinokutendera iwe kuti uwane chinhu chako chakarasika pamepu. Ehe, kusvika parizvino pawakaisa tag yakasarudzika iwe waingogumira kuve mukati meBluetooth renji kuti uiwane, kana kuve nerombo rakanaka kuti munhu ane imwecheteyo app sezvawakapfuura. Iye zvino neApple yekutsvaga network haudi chero ipi yeizvozvo, nekuti chero ipi yakagadziridzwa iPhone, iPad kana Mac inokuudza iwe kuti chako chakarasika chinhu chiri icho chete chinodiwa chekuve padhuze wepa.
Nezve izvi, kana iwe ukarasikirwa nechimwe chinhu unogona kuchimaka sechakarasika muKutsvaga app, uye ratidza kuti kana mumwe munhu akariwana (kunyangwe kana zvisina kuita nemaune) vanokuzivisa nekukuratidza pamepu. Kana akaona kuti pane chiripo chiri kushaikwa, anogonawo kuitora, vhura yake Tsvaga app uye uone meseji yakasarudzika yawakamusiira paakaimaka kuti yarasika, kusanganisira nhamba yefoni yaanogona kufonera kuti abatsire kupora kwake. Iyi Apple Inetiweki network iri padhuze yakakwana system iyo ichakubatsira iwe kudzosera zvako zvakarasika zvibodzwa.
Dzimwe nzira dzekuiwana
Kana isu tangoisa zvisizvo kumba, unogona kuzviita kuti zviitwe mutsindo, kubva kuApp yekutsvaga kana nekubvunza Siri "Aripi makiyi angu?" Saka iwe unogona kuitevera neinzwi kusvikira iwe wariwana. Gudzanzwi rayo rine simba kudarika AirTags, uye zvakare ruzha harumire kutamba kudzamara warega kushanda, izvo zvinoshanda pane kungo tenderera uchibvunza Siri kusvikira waiwana. Uye iwe unogona zvakare kubvunza iyo Yekutsvaga app kuti ikuudze iwe nzira yechinhu chako chakarasika kuitira kana mumwe munhu akabatsira kuzviwana pamepu.
Uye kubva paIOS 15 tichava nesarudzo yekuziviswa kana tikaparadzana nazvo, kuti tikwanise kudzivirira kurasikirwa. Chiziviso chichatiudza kuti isu tasiya makiyi edu, kana bhegi, uye tinogona kumisikidza dzimwe "nzvimbo dzakachengeteka" kuitira kuti kana uripo usazotizivisa kuti takasiya kumashure, saka unogona kusiya bhegi rako kumba usina kuudzwa nezvazvo.
Iyo Chipolo One Spot vocal label ndiyo chaiyo chaiyo nzira kune Apple AirTags. Kunyangwe ichinge ichishaya mamwe maratidziro, haana kukodzera kuitora, uye maficha ayo nemutengo zvinoita kuti chive chigadzirwa chakanakira avo vanoda kudzivirira kurasikirwa nezvinhu zvavo zvakakosha nekushandisa zvakanakira netiweki yekutsvaga. Manzana. Inowanikwa pane yepamutemo webhusaiti yeChipolo (link) kuti pre-kubhuka kwe € 30 pauniti uye € 100 pakiti yezvikamu zvina, nekutumirwa kubva muna Nyamavhuvhu.
Rimwe gore kuzvitonga uye bhatiri rinotsiviwa
IPX5 kushorwa kwemvura
Uchishandisa iyo Apple Kutsvaga network
Mutauri anosvika ku120dB
Kushaikwa kweNFC uye U1 chip
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Chipolo One Spot, yakasarudzika nzira kune maAirTags